Buundada u dhaxeysa Muqaawamada iyo Shirka Asamara
Buundada u dhaxeysa Muqaawamada & Shirka Asamara
Sidaan la socono waxaa si xawli ah u socda u diyaar garowga shirka Casmara, isla sidaas oo kale waxaan ognahay inuu shirkan ka duwan yahay haduu hirgalo shirarkii hore, waxuuna naqon doonaa shirkii ugu horeeyay ee soomara Somali oo ay ka qeyb galaan dad wasni weyn ku leh arimaha Somalia, markaad eegto dadka ku casuuman ee ka qeybgalaya shirka. Sida hadey ahaan laheyd diin, dadnimo, aqoon, waayo aragnimo iyo iney kasoo wada qeybgalayaan xubnaha ay ka kooban tahay bulshada. Waxaan aad uga dareeney daafaha Yurub iyo America iyo wadamada carabtaba sida uu ugu socdo u diyaargarowga iyo hadal heynta shirka Casmara.
Isla sidaas oo kale waa gogoshii ugu horeysey ee la dhigo intii uu qabsadey Somalia gumeysiga, waana gogol ka dhalatey somalida dhaxdeeda oo uusan jirin cid u taraxda iyaga. Ama dowlad tiri anagaa lug ku leh.
Hadaba shirka intaas baaxad le eg ee taariikhda gali doona, waxaa ay soo dhaweyneysaa haduu uu guuleysto, in ay soo dhaweyso rajada Somalia laga qabo in ay xornimo hesho oo ay iska dulqaado gumeysiga iyo midka shaatigiisa gashanba.
Hadaba waxaa laga maarmaan ah in dagaalka Somalia ee dhinaca siyaasiga iyo dhinaca jihaadka ee caskariga ay wada socdaan oo ay jirto buundo isku xiri karta labadaas dhaqdhaqaaq.
Waxaan ognahay oo aragney ka horna Allena noo sheegey inaan xornimadu lagu helin inaad geedka hoos jiifato ama aad danahaada khaaska ku mushquusho, balse ay u baahan tahay in maal iyo nafba loo huro.
Sheyga gobonimada la yiraa maahan helisteeda wax si fudud lagu helo markaad taariikhad dhow iyo mida dheerba aad eegto, laakin dhinaca kale waa shey si fudud lagu waayi karo.
Somalia marka laga reebo dhowrkii dhaqdhaqaayadii xornimo doonka ee ay kamidka yihiin dhaqdhaqaaqii uu calanka u sidey Alaha u naxariistee Sayid Muxamad Cabdulle Xassan , waxay Somalia ku heshey xornimadeeda si fudud marka loo eego wadamada aduunyada.
Waxaan ognahay wadanka Aljeeriya markuu raadsanayay inuu xoroobo iskana dulqaado gumeysiga iney ku qaadatey mudo dheer dad ka badana malayin ay kaga dhimatey, taasi waxay na tusineysaa inaan dhahno Somalia waxay xornimadu ku heshey si fudud, tasoo keentey iney si fududna ku tagtey, oo difaaci waayeen.
Hadaba shirkan casmaro oo ay lafdhabar u yihiin labada garab ee aan soo sheegney kuna xirantahay rajada Somalia bacdal Rabi waxaan oran karnaa sidee lagu heli karaa iney isla jaan qaadaan?
Sh Shariif Sh Axmed iyo Sh Xasan Daahir Aweys oo ah hogaanka labada qof ee ugu muhiimsan xaga siyaasada difaaca dalka, iyagana ay haatan ku sugan yihiin meel aan ka fogeyn madasha shirka.
Waa labada shaqsi ee abuuri karaa iney abuuraan buundada dheere isku xirta qaaabka siyaasiga ee lagu wado Casmaro inuu ka unkamo iyo jihaadka ka socdaa Somalia.
Labadaas shaqsi waxay si fudud ku hanteen iney Somalida ku qanciyaan wax qabadka ururka maxkamadihii lagu diirsadey ee baaxada waynaa ee taariikhda Somalia galey tasoo keentey in beesha caalamka ay si degdeg ah ku aqoonsatey waxqabadkooda inuu yahay mid aan la inkiri karin.
Sh Xassan Daahir iyo Sh Shariif Axmed intii ay Casmara joogeena waxay isu badashey howshooda caskari kasakow iney siyaasada ay door weyn ka ciyaari karaan hadaba qofka isku helaa labadaas door inuu ka ciyaaro barnaamijka xornimo doonka ayaa noqon kara qofka abuuri karaa inuu abuuro buundadaas dheer.
Sameynta buundadaas waxaa ognahay iney tahay mid si sahal ku imaan karin waxaa loo baahan yahay in wakhti dheer lagu bixiyo oo ku dheehan samir iyo dulqaad badan taas oo markuu ugu soo degdego keeni karta iney ku qadato mudo ku dhow bilooyin. Waxaana ognahay inuu shirka ka hartey mudo bil gudaheeda.
Hadaba arintu waa mid aad u adag. Dibna looma dhigi karo, inuu fashilmana waxay sii dheereyneysaa heeryada gumeysiga. Labada garabna waa iney buundadeeda dhisan tahay intaan shirka la furin si waxii shirka kasoo baxaa ay u hirgalaan.
Hadaba inkastoo xalka uu hayo Rabi hadana waxaa la gudboon Sh Sharif iyo Sh Xasan Dahir iney gacan ka helaan walaalahood qurbo joogta ee xiriirka sokeeye la leh muqaawamada ay hogaaminayaan iyaga, kuna nool daafaha dunida gaar ahaan Yurub. Kuwaas oo soo dedejin kara iney la dhisaan buundada loo marayo Shirka Asamara iyo difaaca dalka, ee lagu doonayo in lagu xoroobo.
Dhinaca kale waxaa iyagana u baahan in la eego in aan laga tagin cidkasta oo daneyneysa xornimo doonka Somalia.
Teeda kale waxaa iyana u baahan gudiga farsamo inuu ahado gudi akhrisankara baaxada shirka, culeyska shirka, muhiimada iyo cadowga shirka. Iney fahmaan in shirkan markuu u bato uu gaari karo inuu socon karo 2-6 cisho.
Hadii kale ay ka tagi doonaan dad muhiim ah mashquul ay yihiin owgiis, lana doonayo inuu shirku wax la taaban karo kasoo baxaan oo goobjoog loo wada yahay oo ah soo dhaweynta xornimda Somalia.
Hadii labadaas la waayo ee ah gudiga farsamo oo hufan iyo qurbo joogta si degdeg ah iney ka qeybqaatan dhisida bundadaba iney keeni karto inuu shirku noqdo qabyo.
Ama waxa kasoo baxaa ay adkaato hergelinteeda.
Aduunyadu isbuucayadan waxay soo eegeysaa Asmara iyo sida loogu hagarbaxo shirka soomaalida.